Edemede nile na ihe omume nile - Kraist Sayensi
(Chinese dị mfe)
Soro fe ofufe nro online n'okwu Bekee
"Gịnị bụ Kristen Sayensi?"
Ọgwụgwọ ọrịa n’usoro Kraịst ta
Edemede nile na ihe omume nile
Ọmụmụ ihe nke Baịbụlụ
Kọmiti nke nahụ maka Mgbasa-ozi
Me Kristen Sayensi lekchọ
Chọ ihe ndị ọzọ
Chọ ihe nile gbasara Kristen Sayensi
Baịbụlụ bụ ntọ-ala nke ịlụ ọlụ Kristen Sayensi. Sayensi na Arụike nke nwere Nkpịsị-igodo eji akpọghe ihe edere n’Akwụkwọ nsọ, nke Mary Baker Eddy dere, bụ akwụkwọ ya na Baịbụlụ nalụkọ ọlụ. Izu-ụka ọbụla, ọmụmụ-ihe ahụ nke nwere ahịrị okwu ndị sitere na Baịbụlụ na Sayensi na Arụike narọpụta echiche apụrụ itinye n’ọlụ iji gwọ ọrịa, nke metutara ihe ndị mmadụ nagabiga kwa ụbọchị. Eziokwu ime mmụọ ndịa ka apụrụ itinye n’ọlụ nụzọ dị ire nihe metutara ọtụtụ ndị mmadụ dịka, ime mpụ, nsogbu banyere ogige ebe mmdụ bi, agha, na ubịam.
Ofufe nro online nke anefe n’okwu bekee:
Soro anyị me ihe omume online nke aneme n’okwu bekee, nke gụnyere ofufe nro nke ụbọchị Sunday na Wednesday, Nzukọ nke ụka Nne nke aneme otu ugbo nafọ, na ihe ndị ọzọ.
Ọtụtụ ihe (n’okwu Bekee)
Mụọ edemede nile nke edere banyere ọgwụgwọ ọrịa nke Kristen Sayensi nagwọ nke gụnyere akụkọ ọgwụgwọ ọrịa nke mere nso-nso a, nke dị na The Herald of Christian Science [Herald Kristen Sayensi] na JSH-Online.
The Christian Science Monitor [Kristen Sayensi Monitor] nke Mary Beker Eddy hiwere nafọ 1908 “ka ọ ghara imejọ mmadụ ọbụla, kama ka ọ gọzie mmadụ nile” nakọ akụkọ ihe neme n’ụwa nụzọ nakpọlite echiche dị nma; akụkọ ndị a narọpụta kwa ọganiru na olile-anya.
© 2022 The Christian Science Board of Directors. Echekwara ikike nile.
Websaịt a neji kukis eme ka ọlụ ya naga n’iru, ma nadịwanye nma. Ya mere, dị ka ị nenyocha saịt ahụ ọ pụtara na ị nanabata ka anyị were kukis nalụ ọlụ.